Vaovao - Situation amin'izao fotoana izao sy Prospect amin'ny Chaine sy tsena PTA
Situation and Prospect of Chain and Market PTA
PX no akora mivaingana indrindra amin'ny indostria polyester ， Ny fiovan'ny orinasany dia misy fiantraikany lehibe amin'ny indostria manokana. miditra amin'ny fomba ofisialy ny fampandrosoana ny fahaizan'i Shina ao amin'ny Xylene Road Research.
Voalohany dia jereo ny toe-javatra famatsiana PX manerantany sy ny tinady. Ao amin'ny sehatra manerantany Shina, Korea Atsimo, India, Japon ary Etazonia no laharana dimy voalohany. , satria mpamokatra lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, India koa ny lainga fitakiana lehibe indrindra. Noho ny famoahana ny fangatahana an-trano dia saika 60% amin'ny fangatahana fanao isan-taona no mila miankina amin'ny fanafarana avy any amin'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina toa an'i Korea Atsimo sy Japon. Tamin'ny taona 2018 dia 10,31 tapitrisa taonina ny vokatra vita tamin'ny PX any Sina, ary ny haavon'ny fanafarana dia mahatratra 15,63 tapitrisa taonina, raha lazaina hafa, mila manafatra PX 1 tapitrisa mahery isam-bolana izy ireo.
Eo ambanin'ny fitarihana ny elanelam-barotra sy ny fisintonana tombom-barotra hanomezana ny fanohanana politika ny fanitarana ny fisondrotam-pamokarana Para xylene any Sina dia niditra tao anatin'ny vanim-potoana vaovao tamin'ny taona 2005Satria ohatra Hengli Petrochemical any Dalian, Shenghong Petrochemical any Lianyungang, Jiangsu Tamin'ny taona 2019, ny famokarana PX vaovao misy 4,5 Orinasa tapitrisa dolara Hengli Petrochemical, Hongrun Petrochemical Company, izay ampidirina amn'ny volana Aogositra, ary i Hainan Refining sy Chemical Phase II, izay nampidirina tamin'ny volana Oktobra, dia samy nahatsapa ny asa ara-barotra. Amin'izay fotoana izay, amin'ny ampahefatra izay, misy fampidinana an-tsoratra, ary mety hisy ny fidirana. Tsiahivina fa hahatratra 10,3 tapitrisa taonina ny taham-pamokarana vaovao amin'ity taona ity, fitomboana ny 53% amin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taona lasa. Manomboka amin'ny taona 2020 ka hatramin'ny 2022, dia mbola hisy 25 tapitrisa taonina, ary ny fahaiza-manao vaovao dia apetraka tsena.
Manohitra ny fihoaram-baravarana an-trano hihena ny famatsiana PX any Sina sy ny fijerin'ny fangatahana dia miova be. Noho ny fanitarana haingana ny famokarana PX any Sina dia ny fanjarian-tsakafo sy ny fangatahana ho avy any Azia Avaratra atsinanana dia hanjary ho tafahoatra, ary raha misy elanelam-bidy sy tombony azo atao, dia azo aondrana any amin'ireo firenena manana elanelana ihany koa izy ireo. Fifandraisan'ny varotra miaraka amin'ny Azia atsimo-atsimo ， Misy koa ny mety hisian'ny fanondranana tokana mivadika ho fifanakalozana varotra
Avy amin'ny fomba fijery momba ny famatsiana sy ny fangatahana manerantany, i Shina no loharanon'ny famatsiana lehibe indrindra eran-tany, fa koa ny mpanjifa lehibe indrindra. Ny fahatrarana famatsiana isan-taona any Sina dia 52.29 tapitrisa taonina, ka mahatratra antsasaky ny fitambaran'ny tany manontolo. Raha ny fahitana ny fivezivezena varotra eran-tany, ny volan'ny fanafarana any Shina dia 760.000 taonina, indrindra fa avy any Thailand, Taiwan ary Korea Atsimo.
Avy amin'ny toe-javatra famatsiana anatiny, ny fahazoan-tombom-barotra no fambara lehibe amin'ny famatsiana PT an-trano. Tamin'ny taona 2011, niditra tao amin'ny fanitarana ny fahafaha-mivoatra ny PHP, ka nahatonga ny fiparitahan'ny hery famokarana, izay nahatonga ny famerenam-bidy betsaka tamin'ny PDA. Ao anatin'ny toe-javatra mifaninana, mitaky ny tsy fahampiana firy ny tombom-barotra maharitra, ny fahafaha-manao famokarana mihemotra, dia nesorina ny famatsiana sy ny fangatahana.PT nisokatra tamin'ny taona 2017, niditra tao amin'ny sehatra ny PK mba hanatsara ny hasarobidin'ny fanambinana. Tamin'ny taona 2019 dia niakatra 1700 yuan isaky ny tonta ny tombom-barotra PTA raha nidina tamin'ny onjam-pivoarana vaovao.
Namboarina tamin'ny fanatsarana ny tontolo iainana ny Terminal, hanafainganana ny polyester, fanitarana ny fahafaha-manavao ny indostrian'ny polyester, izay no fiandohan'ny indostria polyester tato anatin'ny roa taona. Niaraka tamin'ny fanitarana, ny fanitarana polyester, ny fifaninanana nihamafy, ka nahena ny haavon'ny tombom-barotra dia miharatsy ny fahaiza-mamokatra polyester amin'ny ho avy.
Raha tsy mifandrindra ny fivoaran'ny indostrian'ny indostrialy, ny sehatra matanjaka mahery vaika dia nanery ny haavon'ny tombom-bokatra mamboly polyester, ny fihoaran'ny fambolena polyester amin'ny fambolena mandritra ny taona. Raha ny fomba fijerin'ny fironana amin'ny ho avy, ny fihenan'ny fisondrotan'ny polyester amin'ny ho avy, ary koa ny sakana fananganana ary ny vidin'ny famokarana ambany dia mifanaraka amin'ny fanitarana ny tombony azo amin'ny polyester. Na izany aza, ny fikaonan'ny varotra Sino-Etazonia dia hisy fiantraikany amin'ny tsena. Ny tarif amin'ny fanodinana lamba any Sina dia hisy fiantraikany mivantana amin'ny fanondranana ny fitafian'i Shina any Etazonia, na dia misy aza ny famantarana ny fanatsarana ny fifampiraharahana varotra farany tany Etazonia. Fifandraisan'i Sino-Etazonia Ny fametrahana taratasin'i Shina amin'ny lamba an-tsokosoko dia misy fiatraikany mivantana amin'ny fanondranana entana any Shina any Etazonia. Na dia misy famantarana mahomby aza ao amin'ny fifampiraharahana farany momba ny varotra Sino-Etazonia, dia nitombo tsikelikely ny fitaovam-panodinana nataon'ny EU sy ny sakana manokana momba an'i Shina tato anatin'ny taona vitsivitsy, ary hita miharihary ny fironana. Hisy fiantraikany mivantana amin'ny fanondranana any Sina izany.
Fotoam-pahefana: Aog. 21-2020